Antananarivo, 03 Desambra 2020: Tamin'ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny sembana, ny UNICEF dia niaraka tamin'i Ramatoa Sahondrarimalala Marie Michelle, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, mba hitsidika ny sekoly tsimialonjafy EPP Ambohidroa I. Ity sekoly ity, izay iray amin'ireo sekoly zokiny indrindra eto Antananarivo, dia nandray nanomboka ny taona 2007 ireo ankizy manana filàna manokana – izany hoe ankizy manana kilema ara-batana, zaza sembana amin'ny fihainoana, ankizy voan'ny « trisomie » na « autisme », ao anatina kilasy tsimialonjafy miaraka amin’ny ankizy hafa.
Voaporofo tamin'ny zavatra niainan'ny sekoly Ambohidroa fa azo atao tsara ny mampiditra ireo zaza sembana anaty fiarahamonina, saingy voalohany aloha dia mitaky fiovana mikasika ny fomba fijery azy ireo izany, ary koa mitaky fanekena fa ireo ankizy ireo dia manana zo mitovy amin’ny ankizy hafa rehetra ary mety ho lasa mpisehatra mitondra fiovana sy manana fizakan-tena, fa tsy vitan'ny hoe olona mpisitraka tombontsoa fotsiny avy amin'ny fiantràn’ny daholobe. Izany dia mbola mitaky ihany koa ny fanekena fa tokony henoina sy omena lanja ny feon’izy ireo eo amin'ny famolavolana politika sy fandaharan’asa.
Eto Madagasikara, araka ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF vao haingana (MICS 2018), iray amin'ireo loharanom-baovao vitsivitsy momba ny ankizy manana fahasembanana dia 10% amin'ireo ankizy 2 ka hatramin'ny 5 taona eto Madagasikara no sembana. Miakatra 14% izany taha izany ho an’ny ankizy 5 ka hatramin'ny 17 taona. Na eo aza izany, na dia misy politika sosialy maro aza natao hampiharina amin'ny olon-drehetra, anisan’izany ireo olona manana fahasembanana, matetika izany dia tsy mahafeno ny filàn'ireto farany izany. Na eo amin'ny sehatry ny fanabeazana aza, ny fanabeazana tsimialonjafy sy ny « fahasembanana » dia tsy tena takatry ny olon-drehetra.
Noho ny teti-bola voafetra sy ny laharam-pahamehana dia tsy tontosa ny hetsika fanohanana ny zon'ny olona sembana, entina miantoka ny « fandraisan’izy ireo anjara feno sy mahomby amin'ny fiaraha-monina miorina amin'ny fitoviana amin'ny hafa ». Ankizy manan-kilema vitsy an'isa ihany tokoa mantsy no mahazo fanabeazana.
Kanefa, ny ankizy manana fahasembanana dia mahavita mihoatra ny fandresena ny sakana amin’ny fampidirana azy ireo ao anaty fiarahamonina. Izy ireo ihany koa dia afaka mitana ny toerana sahaza azy ireo eo amin’ny fiarahamonina ary afaka mampivoatra ny fiainam-piarahamonina misy azy ireo rehefa omena azy ny fomba sy fahafahana manao izany, mitovy amin’ny daholobe. Saingy, ankizy manan-kilema maro be loatra no tsy afaka mandray anjara fotsiny izao. Matetika loatra, izy ireo no farany mahazo fitaovana na tolotra, indrindra rehefa tsy dia fahita firy izany zavatra zaraina izany. Matetika loatra dia famindram-po fotsiny no azon’izy ireo na, ny ratsy kokoa aza, tsy inona izany fa ny fanavakavahana sy ny fanararaotana. Ny tsy fahampiana iainan'ny ankizy sy tanora manana fahasembanana dia fanitsakitsahana ny zon'izy ireo sy ny fitsipiky ny fitoviana ara-drariny, izay mifototra amin'ny fahamendrehana sy ny zon'ny ankizy rehetra, ao anatin'izany ireo olona marefo indrindra sy voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina.
« Ny zanak'olombelona dia tsaraina amin'ny fomba fitondrany ny olona marefo indrindra sy izay manana fiavahana indrindra », hoy i Jean Benoit Manhes, solontenan’ny UNICEF mpisolo toerana eto Madagasikara. « Matetika loatra, ireo ankizy manana fahasembanana dia tsy omena lanja loatra, avakavahana, tsy tafiditra ao anatin’ny fiainam-bahoaka, ary avela ho andraikitry ny ray aman-dreniny na ny vondrom-piarahamonina misy azy, na ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena irery ihany. Anjarantsika rehetra ny manentana ireo mpisehatra eo anatin’ny sehatry ny fahasalamana, fanabeazana, fiahiana ara-tsosialy, famatsiam-bola, haino aman-jery ary ny fampandrosoana mba hanomezana antoka isan'andro, fa tsy amin'ny andro iraisam-pirenena ihany, ny fampidirana tanteraka ireo ankizy ireo anaty fiarahamonina. Ny UNICEF dia mirotsaka an-tsehatra tanteraka hatrany amin'ny fanohanana ny hetsika mikendry ny fanomezana ireo zaza ireo sy ny ray aman-dreniny zo hanana fanantenana, fampidirana azy ireo anaty fiarahamonina ary fanohanana, » hoy izy.
Ny fampiasam-bola amin'ny fanabeazana tsimanavaka izay miompana manokana amin’ny fitoviana ara-drariny, dia fanombohana amin’ny fiatrehana ny sakana amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sahaza. Ny valin'ny tetik’asa fanampiana dia mikendry ny famporisihana ny ray aman-dreny handefa ny zanany any an-tsekoly ka hanohizan’ny ankizy fianarana, ary koa ny fandrisihana ny zaza hianatra amin'ny toerana azo antoka, izay mahafeno ny fepetra rehetra amin'ny fampivelarana ny fahafaha-manaon’izy ireo.
Mba hahatratrarana io vina stratejika io, nanomboka ny taona 2012, ny UNICEF dia nampiroborobo ny zon'ny ankizy rehetra mba hahazo:
- Efitrano fianarana azo ampiasaina, ahitana fanaka sy lavapiringa mitokana ho an'ny zazalahy sy zazavavy (hoatsangana),
- Fianarana sy fanohanana ara-materialy mifanaraka amin'ny fampandrosoana,
- Fanabeazana sy fikarakarana ara-kalitao ary tsimialonjafy (mpampianatra amin'ny « formation initiale » sy « formation continue ».)
Ary tsy ho ela, ny UNICEF dia hanome fitaovana ho an'ny ankizy miisa 4 200 manovo fianarana ao amin’ny ivontoerana manokana 59 manerana ny nosy. Ny fanomezana ireo « kit scolaire » ireo dia natao mba hanentanana ny ray aman-dreny sy ny ankizy hiverina an-tsekoly (taorian'ny fikatonan’ny sekoly nandritra ny krizy ara-pahasalamana); hetsika ara-drariny izany satria ireo ankizy tao amin’ireny ivontoerana ireny dia tsy mba nahazo izany fitaovam-pianarana izany.
Zon’ny olona mitondra fahasembanana
Ankizy manana fahasembanana
Fiheverana ny olona manana fahasembanana
Fandraisana anjara fanampiny avy amin’i Norvezy ho an'ny fanabeazana ho an'ny rehetra
Mpianatra eny amin’ny kolejy maherin’ny 600 000 no afaka hianatra samirery amin’ny alàlan’ireo bokikely vaovao mifanaraka amin’izany
Torolàlana vaovao enti-mizotra mankany amin’ny fanokafana am-pilaminana ny sekoly